Shiinaha soosaarayaasha maaskaro iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. | Chapman
✭Sababtoo ah baahida sare ee qaybtan dareeraha ah ee silikoonka ah, waxaan u samaynay 6 nooc oo wasakhda LSR ah macaamiishayada guud ahaan. Tirada godadka ku jira caarwalba waa 4 dalool, sheybaarada hore iyo gadaalna waxaa laga sameeyaa S136 maadada birta adag, adkeysiguna waa HRC48-52 darajo.
✭Shuruudaha muuqaalka adag ee muuqaalka awgood, khadka kala-baxa ee badeecada waa in lagu kontoroolo gudaha 0.03mm. Saxsanaanta wax soo saarka caaryada waa in lagu xakameeyaa inta u dhexeysa 0.005-0.01mm. iyo dusha sare ee aan kala go’a lahayn, way ku adag tahay wax soo saarkeena caaryada. Waa inaan hubinaa in qalabkayaga farsamaynta iyo tikniyoolajiyaddu ay la kulmi karaan shuruudaha macaamiisha. Iyada oo loo marayo 35 maalmood oo wax soo saar iyo soo saarid ah, baaritaankayaga caaryada ayaa ahaa mid aad u guuleystey, macaamiisheenana isla markiiba waxay geliyeen wax soo saar ballaaran.
✭Haddii aad leedahay alaabooyin la mid ah, Fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto. Waxaan noqon doonaa lammaanahaaga ugu fiican.
Qaab MAYA. CPM-20-S1066
Geedi-socodka Dhammaystirka Dusha sare VDI-12
Qalabka caaga ah Silicon
Miisaanka qaybta 50.7g
Naqshadeynta Software UG
Cabbirka qaybta 128.00 X 120.00 X 65.00mm
Loo habeeyay Loo habeeyay
Cabirka caaryada 400 X 450 X 417mm
Magaca Qaybta Maaskaro LSR
Dalool caaryada 1 * 4
Orodyahan Orodyahanka qabow ee albaabka hoostiisa
Wax caaryada S136 / P20
Wareegga Nolosha Wareejinta 1,000,000
Waqtiga Hogaaminta 35 maalmood
Qaab Wareega Waqtiga: 120-meeyadii
Lacag bixinta T T
Waxaa lagu rakibay qalabka wax lagu nadiifiyo ee bey'ada loo isticmaalo ee silikoon leh oo leh shaabad hawo adag leh, Maaskarada waxaa markii hore loo qorsheeyay oo loo sameeyay shaqaalaha safka hore ee jawiga halista sare leh. Hadda waxaa loo diyaariyey qof walba.
Maaskarkani sidoo kale waa kii ugu horreeyay noociisa ah * maxaa yeelay wuxuu hubiyaa heerar sare oo ilaalin ah iyada oo ay ugu wacan tahay naqshadeynta kartridge-ka cusub ee la qabsan karo. Sababtoo ah waxay ka sameysan tahay waxyaabo maqaarka u habboon oo aan la isku haleyn karin, maaskarada si fudud ayaa looga nadiifin karaa, dib loo isticmaali karaa maalin kasta waxayna socon kartaa illaa laba sano.
Fayraska 'coronavirus' wuxuu ku faafaa dhibcaha neef-mareenka marka qof jirran uu qufaco ama hindhiso, ama inuu lakulmo dusha sumeysan ka dibna uu taabto indhahaaga, sankaaga ama afkaaga.
Loogu talagalay 3D wajiga xogta si ay ugu haboonaato qaabab kala duwan oo wajiga ah, silikoonka jilicsan ayaa la jaan qaadaya xijaabka wejiyada wejiga, taas oo ka dhigaysa mid raaxo leh in la xidho muddo dheer adigoon sixin, nabar ama xanaaqin
Abuuritaanka qiimaha macaamiisha iyo kaamil ahaanta waa falsafadeena. Waxaad ku ogaan doontaa faa'iidooyin badan adoo la shaqeynaya CPM!
Waxaan khibrad u leenahay dhammaan noocyada kala duwan ee birta iyo rakibidda heerka caalamiga ah
Baako & Bakhaarro
Hore: Daboolka qalabka adeegga ee saxda ah
Xiga: Qaybta Xakamaynta iyo Iskuxiraha Kharashka daboolka hoose
Qalabka cabbiraadda heerkulka
34 iyo 4 isku xiraha pin
Qaybta Xakamaynta iyo Iskuxiraha Kharashka daboolka hoose
Bangiga kaarka amaahda POS